Kismaayo News » Kismaayo iyo Xamar, bar-bilow wanaagsan
Kismaayo iyo Xamar, bar-bilow wanaagsan
Kn:Walaalo is jeclaaday wayna xoola badiyaan, wayna xabaalo yareeyaan, Xamar iyo Kismaayo waxaa u furmay bog cusub oo lagu daahfuray wanaag, wax wada qabsi, wada tashi, is cafis iyo wadajir u baadi goobista jidkii qaranimada ee laga ambaday dhawr iyo labaatan sano ka hor.
Waxaa sidoo kale la xiray, misna la rajaynayaa in meel fagaare ah lagu gubo, boggogii xumaanta, dulmiga, xaqdara, xaqiraada, cadawtooyada, naafaynta iyo docwareenka wadaniyadda.
Sidaan horay u sheegnay waxaa maanta Kismaayo gaaray masuuliyiintii ugu badnaa abid tan iyo intay Soomaaliya calanka yeelatay, kuwaasi oo inta caasimadda ka duulaan cirbaha saara maanyada Kismaayo. Si taasi la mid ah, waxay wafuuddani la kulmeen qaabilaad iyo soo dhawayntii ugu wanaagsanayd abid, taasi oo ay la kulmaan dad soo booqday Kismaayo.
Wafuudda waxaa garoonka ku qaabilay saraakiisha ugu saraysa ciidamada huwanta, Gudoomiyaha kumeel gaarka ee Kismaayo, Sh. Axmed Madoobe, Taliyaha ciidamada qalabka sida ee Jubbooyinka iyo Gedo, Gen. Ismaacil saxardiid iyo masuuliyiinta ugu saraysa ciidamada AMISON qaybtooda ka hawlgasha gobolada sii koonfureed.
Amaanka garoonka ilaa iyo magaalada ayaa ahaa mid aad loo adkeeyay oo sankuneefle daayee ay shinbaraha xaataa hawada ka maagteen.
Meeqaamka intaasi le’eg, soo dhawaynta wacan waxaa mutaystay oo loo sameeyay ergo qaran ahna marti sharaf ay kamid ahaayeen, Wasiirka warfaafinta, Boostada, Isgaarsiinta iyo Dalxiiska Cabdullahi Cilmooge Xirsi, Wasiirka Gaashaandhigga C/xakiim Maxamud Xaaji Fiqi, Wasiirka arimaha Gudaha C/karim Xuseen Guuleed, Wasiirka Cadaaladda iyo Arimaha diinta Cabdullahi Abyan Nuur, Taliyaha guud ee ciidamada Qalabka sida Gen. C/qadir Sh. Cali Diini, Xildhibaano, wasiir ku xigeeno, agaasimeyaal, saraakiil ciidan iyo warfidiyeeno.
Ciidamada qalabka sida ee ku joogay gawaarida gaashaaman ee indhaha galeyrka ka dhex bidhaaminaaya habaaska iyo busta ka caysa wax kasta oo dhib u keeni kara marti sharafta, salaanta kal gacal ee gorodda ay iska maleegaayeen masuuliyiinta Kismaayo iyo kuwa Xamar ka soo baqoolay, marxabada aan naxli iyo nusqaanta lahayn iyo sida qalbiga furan ee saraaxadda leh ee loo wada hadlay ayadoo kajanka iyo kaftanka kolba hoosta la isaga dusinaayo sidii lagu yaqiin walaalo kala maaganaa oo mur (mudh) isku soo yiri, ayaa waxay ii sawirtay qarankii dumay ee caalamku u baxshay “dal fashilmay” oo noqday “dal tashaday” waxayna maskaxdaydu cajaladdii dib ugu celisay barisamaadkii xiligii Soomaaliya ay ahayd libaaxii Afrika, markaasaan ilmada xajin waayay.
Kulan dhex maray labada dhinac, ayaa la isugu garaabay, laguna heshiiyay in socdaal iyo hayaan walaaltinimo la wada galo, qolabana wixii dhinaceeda ku qeyba ama ku xirnaada ay ka soo baxdo hagrasho la’aan. Kulan kale ayaa loo maldanyahay, wafuuddiina waxaa loo galbiyay caawa daaro loo firaashay. Waxaan soo xusuustay gabayaagii Soomaaliyeed ee barisamaadkii yiri “kaluun duban, digaag shiilan oo daawo lagu shiilay, oo deeqlaguu siini Xamar u soo doono”, marti sharafta waxa loo loogay, malaheyga hilib dad iyo mid dugaag mooyee wax kasta oo jidiinka mari kara.
Waftiga wax san bay la yimaadeen, heshiisyada la filaayo in labada dhinac ay kala sixiixdaan ka sokow, waxay mushaaraad si siman ugu qaybiyeen ciidamada Soomaalida oo aan loo kala soocin sumadda ay ku hawlgalayeen, waxay balanqaadeen in dhamaan askartii ku dhaawacantay dagaaladii ka dhacay gobolka kuwaasi oo daadsan ilaa iyo gudaha Kenya kuwooda liita loo qaadi doono dalka dibaddiisa, kuwa kalana loo bilaabayo daryeel joogta ah.
Sidoo kale, wasaaradda Warfaafinta ayaa soo gaarsiisay Kismaayo laba idaacadood oo FM ah, ayadoo midkood laga taagayo Kismaayo, halka midka kalana la sheegay in lagaynaayo Afmadow si guud ahaan gobolka ay u gaarto idaacadda Qaranka.
Isku soo duub oo, is afgarshada walaaltinimo ee dhex martay Kismaayo iyo Xamar waa barbilow wanaagsan oo u baahan in lasii xoojiyo, ayadoo laga fogaanayo wax kasta oo carqalad ku keeni kara ama turunturayn kara, kuwaasi oo ay kow ka yihiin carabka dalabta leh oo la xakameeyo, dacarta oo la dajiyo, wanaagga oo kor la soo mariyo, isla markaana tanaasul, samir iyo isu dulqaad lamuujiyo.